musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » 13 Mapurojekiti ematunhu gumi nematatu ekuchengetedza Saiti yeHimalaya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tulip Bindu mu Uttarakhand
Nyika yezvikomo ye Uttarakhand, nyika iri kuchamhembe kweIndia yakayambuka neHimalaya, inoronga kusimudzira mapurojekiti gumi nematatu ekushanya mumatunhu ayo gumi nematatu.
Chinangwa chemapurojekiti ndechekufambisa kushanya kubva kune yakaipa misungo nekuda kwe COVID-19 kuenda kune yakazara uye yakawanda kuyerera kwevaenzi.
Mari yezvirongwa izvi iri kutsvaga kubva kuhurumende pamwe nemasangano akazvimirira ekuvandudza.
Sezviri kuitika pasi rese, kushanya kuri kutsvaga kudzivirira kuwandisa kwevanhu uye kupa sarudzo dzakanaka dzevashanyi.
Matunhu gumi nematatu eUttarakhand ndiAlmora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Dehradun, Haridwar, Nainital, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri, Udham Singh Ngar, uye Uttarkashi. Bindu re tulip mudunhu reChamoli uye Astro Park mamwe emapurojekiti akanangwa.
Munguva pfupi yapfuura muIndia, sezviri kuitika kumwe kunhu, tarisiro yanga iri yekutarisa kushanya kubva kune hutano maonero uye kudzivisa misungo yekare nekuda kwe COVID-19 nezvose zvayakanakira nezvayo. Uttarakhand imwe yenyika dzichangoburwa kutarisisa kutashanya kubva kune macro-holistic angle kuitira kuti kukanganisa kwezvekushanya kurambe kuri kwakanaka.
Chinangwa ndechekuparadzira mapurojekiti kunzvimbo dzakasiyana kuitira kuti kugona kwekushanya kurerutswe. Kuita kuda kunofanirwa kubatsira kubvisa kusangana kwevashanyi kubva kunzvimbo dziripo, sekureva kwevakuru vekushanya.
Nyamavhuvhu 8, 2021 pa20: 07
Hatibvumire zvese zvataurwa. Mhinduro yako yakasimudzira kubhejera pamhepo uye yakanga isina hukama nenyaya.